Madaxweyne Xasan: Haweenku waa hormuudka iyo laf-dhabarka bulshada Soomaaliyeed – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweyne Xasan: Haweenku waa hormuudka iyo laf-dhabarka bulshada Soomaaliyeed
8th March 2014 A warsame Af Soomaali 0
Muqdisho – Mareeg.com: Madaxweynha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamud oo ka hadlayey munaasabadda maalinta Haweenka Caalamka ayaa hambalyeey haweenka Soomaaliyeed.
“Waxaan marka hore u dirayaa hambalyo dhammaan haweenka Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa iyo dibedda ku kala nool, waxaana leeyahay sii xoojiya doorkiina muhiimka u ah shacabka Soomaaliyeed” ayuu yiri madaxweyne Xasan.
“Haweenku waa hormuudka iyo laf-dhabarka bulshada Soomaaliyeed. Doorkii 23kii sano ee la soo dhaafayna waa mid muuqda oo ay ahaayeen hal-bowlaha carruurta iyo qoyskaba oo ay mas’uuliyada qoyska dhanka shaqada iyo dhaqaalahaba hayeen.” ayuu sidoo kale yiri madaxweyne Xasan Sheekh.
“Diinteenna Suuban iyo dhaqankeena wanaagsan ayaa tilmaamaya muhiimada Haweenka, shacabkana waxaan uga mahadcelinayaa sida ay marwalba u karaameeyaan, u sharfaan una dhowraan xuquuqda dumarka Soomaaliyeed. Dumarka Soomaaliyeed kuwooda gudaha joogana waxey mar-walba ka shaqeynayeen sidii dagaalada iyo collaadaha loogu bedeli lahaa nabad iyo horumar. Kuwooda ka mid noqday Qurbo-joogta Soomaaliyeedna waxey hormuud ka ahaayeen sidii qoysaskooda iyo Soomaalida kaleba ay ugu soo diri lahaayeen biilkooda. Qoysaska gabdhaha qurbaha ka aadayna waxey noqdeen kuwo aan illoobin qoyskooda iyo deriskaba.” ayuu yiri Madaxweynuhu
Sidoo kale gabdhaha Soomaaliyeed ee Qurba joogta waxey fursad u heleen waxbarasho oo maanta ay muuqato kaalinta ay waxbarashada gabadhaha Soomaaliyeed uga jiraan, waxeyna noo tahay ammaan, dhiirigelin iyo wax lagu faano.
Madaxweynaha oo sii haldaya ayaa yiri “Ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa meel walba oo ay joogaan inay sii xoojiyaan taageerada gabdhaha iyo haweenka Soomaaliyeed oo lagu dhiiri geliyo waxbarashada, shaqada, si ay ula tartamaan haweenka adduunka. Haweenka Soomaaliyeed waa inay danta guud ku midoobaan oo aragtiyaha kala duwan looga gudbaa si midnimo iyo wadajir ah. Ummad walbana horumarkeedu waxuu ku xiran yahay sida loo sharfo oo loo qiimeeyo dumarkooda.”
“Dowladda waxaa ka go’an inay sii xoojiso dadaalkeeda ku wajahan sidii dumarka Soomaaliyeed ay u heli lahaa xuquuqahooda oo ay bulshada uga dhex muuqan lahaayeen. Waana inaan ku dhiiri gelinaa dumarka inay siyaasadda, waxbarashada iyo ganacsiga ka qeybqaataan.” ayuu madaxweyn Xasan kusoo gebagebeeyey hadalkiisa.
Maanta oo kale oo ku began 8-da Maarso ayaa caalamka laga xusaan maamilnta dumarka, waxaana xilligaas haweenku uga faa’iideystaan iney caalamka u sheegaan dhibaatada heysata iyo wax ay ku haminayaan.
Wasiirada Soomaaliya oo meel mariyey hindise sharciyeedka canshuuraha barriga
Wasiir Guuled oo iska diiday eedeyn uga timid gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir